Mac တွင်ပထမဆုံးမိတ်သဟာယဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖန်တီးပါ ငါက Mac ပါ
Peter Rhodes | | Apple, Mac OS X ကို, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, လဲ tutorial
စပိန်နိုင်ငံရှိမိသားစုများစွာသည်ကျင်းပသောသို့မဟုတ်ကျင်းပမည့်အခမ်းအနားကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အိမ်အတွင်းရှိကလေးငယ်များ၏ပထမဆုံးမိတ်သဟာယဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူတို့အဘို့အကြားအထူးဖြစ်လာတဲ့နေ့ဖြစ်၏ ဤကာလ၌ကကိုယ်စားပြုအမှတ်လက္ခဏာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
မိတ်သဟာယတိုင်းတွင်ချို့တဲ့သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အထူးဓာတ်ပုံဆရာတစ် ဦး အားအပ်နှင်းထားသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းလို။ သင်၏ Apple, iPhone နှင့် Mac ကိရိယာများကိုမသုံးလိုသောကိစ္စဖြစ်နိုင်သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဲစွမ်းသတ္တိရှိရှိနဲ့ဖန်တီးဖို့ဥပမာအားဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံစာအုပ်ကိုဖန်တီးရန်။
တော်တော်များများရှိပါတယ် ဝဘ် ဒီအလုပ်အမျိုးအစားကိုသင်ဘယ်မှာလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Mac ပေါ်မှာအဆင့်အနည်းငယ်နဲ့အသစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြလိမ့်မယ်။ OS X Yosemite ဓါတ်ပုံများအက်ပလီကေးရှင်း. အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည် အချိန်တိုအတွင်းမှာသင်တင်လိုက်သောစာမျက်နှာအရေအတွက်နှင့်သင်မည်သို့ပြင်ဆင်ပုံပေါ် မူတည်၍ သင့်ကိုယ်ပိုင် iPhone နှင့်သင်ရိုက်ကူးခဲ့သောဓာတ်ပုံတစ်ပုံလုံးကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဒါဟာအယ်လ်ဘမ်၏နောက်ဆုံးအရည်အသွေးသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကသင့်ကိုကမ်းလှမ်းသည့်အရာနှင့်မတူနိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာကသူ့မှာတန်ဖိုးရှိပြီးရလဒ်တွေကတကယ်ကောင်းပါတယ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကိုဖန်တီးရန်သင်ပြုလုပ်ရမည့်အဆင့်များမှာ -
ပထမတစ်ခုကတော့ဓာတ်ပုံ session ကို reflex camera နဲ့ဖြစ်စေ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် iPhone နဲ့ဖြစ်စေလုပ်ရမယ်။ သင်သိတဲ့အတိုင်း iPhone6or6Plus ဖြစ်လျှင် မင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ပုံအချို့ရှိမယ်ဆိုတာသေချာတယ်။
ယခုသင်ရမည် ဓါတ်ပုံအားလုံးကို Mac ပေါ်ရှိ Photos သို့တင်ပို့ပါ။ တင်သွင်းပြီးသည်နှင့်သင်ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကိုစုစည်းနိုင်အောင်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖန်တီးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးသည်။
အခုပြတင်းပေါက်ထိပ်ကိုရောက်ပြီး Projects tab ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါ "+" ကို နှိပ်၍ "Book" ကိုရွေးချယ်ပါ။.
နောက်ပြီးတော့ Apple ကပေးတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေသုံးခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ရင်ပြင်, ဂန္ထဝင်သို့မဟုတ်တောအဖုံး။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီတွင်သင့်အားအရွယ်အစားနှစ်မျိုးနှင့်စျေးနှုန်းနှစ်ခုအသီးသီးပေးထားသည်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ သင့်တွင်ရှိသောအခြေခံစာမျက်နှာအရေအတွက်နှင့်သင်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုသင့်အားအသိပေးသည် သင်ပိုထည့်ပါစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီ။
ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးမည့်စာအုပ်အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ထိုစာအုပ်၏အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်း ၁၄ ခုအကြားတွင် Apple ကကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။ အခင်းအကျင်းပေါ်မူတည် သင်၎င်း၏စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်လက်ရှိခေါင်းစဉ်များကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ယခုသင်၏ပုံရိပ်သည်စာအုပ်ထဲတွင်ထုတ်ဝေလိုက်သောစာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏အပေါက်တိုင်းတွင်ဓာတ်ပုံများကိုထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အောက်ပိုင်းတွင်သင်နှိပ်ရမည် «ဓာတ်ပုံထည့်သည်»သူတို့ကိုဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်မှရွေးပြီးလက်ခံပါ။ မင်းနားလည်မယ်ဆိုရင် လျှောက်လွှာကသင့်အားဓာတ်ပုံများကိုကျပန်းထည့်ရန်«ဖြည့်ပါ အလိုအလျောက် "။ အကယ်၍ သင်စိတ်မဝင်စားလျှင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စာမျက်နှာများ၏ပုံပန်းသဏ္toာန်ကိုပြုပြင်ရန်သင်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အားပြလိမ့်မည် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံစီ၏အောက်တွင်« Options »ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။.
ညာဘက်ခြမ်းရှိ window ၏ထိပ်တွင် icon သုံးခုရှိသည် သူတို့သည်သင့်အား "a posteriori" စာအုပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုသည်။
၀ ယ်ယူမှုကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်ဝယ်စာအုပ်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်သည်သင်၏စာအုပ်အိမ်မှာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပြကြလိမ့်မည် Apple ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်သောအရည်အသွေးနှင့်အတူ။
သင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ မိသားစုသို့မဟုတ်အသိအကျွမ်းများမှယောက်ျားလေးများသို့မဟုတ်မိန်းကလေးများအတွက်ပထမဆုံးမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံစာအုပ်ကိုဖန်တီးရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဖန်တီးမှုသည်မည်သို့ကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရခြင်းကိုသင်နှစ်သက်သောတစ်ချိန်တည်းတွင်ထိုအံ့သြဖွယ်ရာနေ့ကိုသတိရသည့်အခါတိုင်းသင်ပျော်ရွှင်ကြည့်နိုင်သည်။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အလုပ်ဆင်းမင်းအချိန်မှန်နေသေးတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » Mac မှာပထမဆုံးမိတ်သဟာယဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
သင်၏ Mac သည် iCloud နှင့်မှန်ကန်စွာစည်းညှိနေသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားဖြေရှင်းပေးမည်
သင်၏အသုံးပြုထားသော Mac ကိုလုံခြုံစွာဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ